Global Voices teny Malagasy » Miresaka Momba Ny Fandresen’i Obama Tao Iowa Ny Bilaogera Iraniana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Oktobra 2017 3:36 GMT 1	 · Mpanoratra Fred Petrossian Nandika Miranah
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Amerika Avaratra, Etazonia, Iràna, Israely, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fifidianana, Fitantanam-pitondrana, Hevitra, Mediam-bahoaka, Politika
Bilaogera Iraniana maromaro no miresaka momba ny fandresen'ilay kandidà ho filoha amerikana, Barack Obama , tao Iowa. Ity no fifaninanana fanendrena voalohany amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena taona 2008 . Faly tamin'ny fandresen'i Obama ny sasany, raha nanombana mikasika ny fiantraikan'ny “Obama ho filoha” amin'ny fiainana ara-politika Iraniana kosa ny hafa.
Farhad Afshar nandinika  momba ny ankabeazan'ny mponina any Iowa izay fotsy hoditra avokoa kanefa nifidy kandida mainty hoditra. Manoratra ihany koa ilay bilaogera hoe:
Neghano kosa nandray  ny fifidianana Amerikana ho fandresena goavana amin'ny demaokrasia ary nilaza fa vokatry ny ezaka sy ny tolon'ny fiarahamonim-pirenena nandritra ny 300 taona, sy tsy ho vita indray alina ny demaokrasia any Etazonia.
Nikahang Kosar, mpanao sariitatra sady mpanao gazety nilaza fa “fanovàna” ny hafatr'i Obama ary manohana azy ny tanora, na dia toa mbola mety ho voafidy amin'ny fanjakana maro aza i Hillary Clinton . Nilaza koa ity bilaogera ity fa Hussein no anarana fanampiny an'i Obama, ka mety hampino ny olona ny haino aman-jery elatra ankavanana fa mifamatotra amin'ny islamista mahery fihetsika izy. Nilaza i Nikahang fa maro ireo Amerikana matahotra ny anaran'ny Miozolomana sy Islamika. Farany, nanampy ilay bilaogera fa raha mandresy amin'ny fifidianana filoham-pirenena i Obama, dia ho tanteraka ihany ny nofinofin'i Martin Luther King .
Nilaza i Nonoghalam fa tsy dia nilaza zavatra betsaka momba an'i Obama tsy tahaka ireo kandidà rehetra ny gazety malaza Israeliana, Haaretz . Araka ny voalazan'ilay bilaogera, ny tena nisongadina dia ny fanohanana miharihary an'i Israely avy amin'ny kandidà tsirairay. Te hiresaka mivantana amin'i Iran i Barack.
Farrad02 nanoratra  tao amin'ny bilaogy Iranian.com:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/10/26/109152/
 fifaninanana fanendrena voalohany amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena taona 2008: http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7170954.stm
 nilaza : http://nikahang.blogspot.com/2008/01/i-have-dream.html
 Tsy nazava tamin'i : http://blog.360.yahoo.com/blog-2qVmPbowdq8eT5FbkjzZ95PUexk-?cq=1